Gịnị mere Samsung TV Ike Play Video Format? r
Ya mere, ị dị nnọọ zụtara a Samsung Smart TV na chọrọ igwu videos site na kọmputa gị iji ya. Mgbe ahụ, ị ​​na-nri, dị ka anyị ga-agwa gị otú ị nweta na mfe ma dị mfe nzọụkwụ. Were a lee anya na obere ndu na anyị mere maka gị.
Olee otú iji Samsung TV na-egwu videos site na kọmputa
Samsung Smart TV na-ahapụ gị ịkọrọ gị videos na ndị ọzọ na media faịlụ n'elu a WiFi netwọk mfe na bụ DLNA Dabara. All na i nwere ime bụ iji All Share ngwa na-abịa na ya inbuilt nakwa hụ na gị na kọmputa na-ahazi dị ka ihe nkesa DLNA.
Nzọụkwụ 1: Hazi kọmputa gị dị ka ihe nkesa DLNA
• Mepee Amara Bar (Windows 8) na mgbe ahụ Ntọala
• See na WiFi icon
• Chọta gị WiFi netwọk na nri pịa ya
• Họrọ nhọrọ 'Tụgharịa Ịkekọrịta On na Off'
• Na-esote ihuenyo, họrọ 'Ee ...' aka òkè na jikọọ na niile dakọtara ngwaọrụ
Nzọụkwụ 2: Iji Samsung TV ka ịnweta ọdịnaya vidiyo na kọmputa gị
• Gbanye gị Samsung TV ugbu a
• Pịa na Smart Hub button
• Ẹkedori ke All Share Play ngwa
• Site ngwa isi window, họrọ Atiya Videos na mgbe ahụ na-egwu onye ị chọrọ
Samsung TV akwado video formats
Gị Samsung TV na-emekarị na-abịa na a ntuziaka na depụtara ndị dị iche iche video formats na ọ nwere ike na-akwado Otú ọ dị; n'ozuzu na Samsung TV pụrụ ịkwado ndị na-esonụ formats enweghị ihe ọ bụla okwu.
Ka ị pụrụ ịhụ, Samsung TV pụrụ nanị na-akwado otu njuaka video formats natively. Mgbe ahụ ihe ị ga-eme gị na MKV na ndị ọzọ na-emegide faịlụ, olee otú ị ga-egwu ha na gị na Samsung TV? Anyị bụ ndị ebe a iji nye unu ozi ọma na ugbu a, ị nwere ike igwu ndị niile video formats iji Wondershare Video Converter Ultimate - otu nke kasị mma video converters na streamers si n'ebe. Ọ nwere ike na ọ bụghị nanị na tọghata gị vidiyo na n'elu 150 formats ma na-akwado 4K UHD kamakwa pụrụ enuba gị videos kpọmkwem site na kọmputa gị ka gị na Samsung Smart TV. Gị na kọmputa na TV ga-ejikọrọ na otu netwọk n'ihi na ọ na-arụ ọrụ.
Na-akwado ihe ọ bụla video na ọdịyo formats.
Tọghata ngwaọrụ na kachasị presets maka mfe playback.
Dezie video dị ka a ọkachamara video edezi usoro.
Igosi na ndị kasị akakabarede ọnụego, 30X ngwa ngwa ọsọ
Lossless akakabarede - Ọ dịghị mmepụta àgwà ọnwụ.
Akwado os: Windows NT4 / 2000/2003 / XP / Vista / 7/8, Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6
Olee otú iji Wondershare Video Converter Ultimate iji tọghata videos n'ihi na gị Samsung TV
Nzọụkwụ 1: Ozugbo i jikọọ kọmputa gị na Samsung TV na otu netwọk, Video Converter Ultimate kwesịrị na-akpaghị aka ịchọpụta gị gụgharia ngwaọrụ nke ga-egosipụta n'okpuru Stream taabụ na n'aka-ekpe n'akụkụ nke isi ngwa window.
Nzọụkwụ 2: Họrọ tọghata taabụ site na isi window ma tinye video faịlụ na ị ga-achọ converted n'ihi na gị Samsung TV. Rịba ama na Wondershare-enye gị ohere Dọrọ na dobe gị video faịlụ na-Ntụgharị Tab. Ugbu a, họrọ faịlụ ị ga-achọ iji tọghata na kwa gụgharia ngwaọrụ. Mgbe ahụ, pịa bọtịnụ Stream n'aka-nri n'akụkụ ala.
Nzọụkwụ 3: Ugbu a, họrọ Download taabụ site na isi interface na-aga Finished ngalaba. Ka ịmalite ịkpọ egwu converted video faịlụ, ị nanị nwere pịa na WiFi / Play na TV icon nyere n'aka-nri n'akụkụ nke ọ bụla video faịlụ.
Samsung Galaxy S3 Group ide ozi n'ekwe ntị si PC
> Resource> Samsung> Gịnị mere Samsung TV Ike Play Video Format?